Florentino Perez Oo Dalab Ku Tijaabin Doona Liverpool Si Uu Iskugu Dayo Saxiixa Mohamed Salah. | Laacib.net
Florentino Perez Oo Dalab Ku Tijaabin Doona Liverpool Si Uu Iskugu Dayo Saxiixa Mohamed Salah.
Madax waynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa diyaar u ah in uu dalab ku tijaabiyo iska caabinta Liverpool ee Mohamed Salah.
Perez ayaa doonaya in uu ka soo baxo balan qaadyadii uu Zinedine Zidane dib ugu soo celiyay Santiago Bernabeu wuxuuna kooxda u samayn doonaa saxiixyo magacyo waa wayn leh waxaana liiskan ku jira Mohamed Salah.
Inkasta oo ay Real Madrid inta badan ku mashquulsanayd Eden Hazard, Pual Pogba, Christain Eriksen, Kylian Mbappe iyo Neymar jr, haddana waxa soo baxay in Madrid ay dalab diyaar ula tahay Mohamed Salah.
Wariyaha Canal+ ee Philippe Carayon ayaa shaaciyay in uu jiro xidhiidh hordhac ah oo u dhexeeyay Mohamed Salah iyo kooxda Real Madrid.
Philippe Carayon ayaa yidhi: “Waxaa jiray xidhiidho hordhac ah oo u dhexeeyay Real Madrid iyo Mohamed Salah”. Wuxuuna ku sheegay in ay Madrid doonayso saxiixa xidiga reer Masar.
Mohamed Salah oo ka mid ah ciyaartoyda kubbada cagta waqtiga xaadirkan ugu qiimaha badan ayayna Liverpool doonayn in uu kooxdeeda ka baxo maadaama oo uu sii joogteeyay qaab ciyaareedkii xili ciyaareedkiisi ugu horeeyay ee Anfield.
Laakiin wararka ayaa sheegaya in Real Madrid ay dalab ku tijaabin doonto inta ay gaadhsiisan tahay iska caabinta Liverpool ay ku diidan tahay in Mohamed Salah aanu iib ahayn.
Mohamed Salah ma aha xidigii ugu horeeyay ee Liverpool ka tirsan ee ay Real Madrid balse waxay xagaagii hore doonaysay saxiixa Sadio Mane balse markii uu Zidane shaqada iska casilay ayay rajadaasi burburtay.
Liverpool ayaan filayn in ay aqbali doonto wax dalab ah oo laga soo gudbiyo ciyaartoyda muhiimka ah ee kooxdeeda iyada oo Jurgen Klopp uu isha ku hayo waxyaabihii uu ku soo xoojin lahaa kooxdii uu dagaalka wayn ku soo galay xili ciyaareedkan.
Mohamed Salah ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ku guulaystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta premier League inkasta oo Sadio Mane iyo Aubameyang ay xili ciyaareedkan kula guulaysteen.
Florentino Perez ayaa doonaya in uu Santiago Bernabeu ka dareeriyo 14 ka mid ah ciyaartoydii xili ciyaareedkan ku soo fashilmay kooxdiisa wuxuuna Salah ku darsaday liiska ciyaartoyda bartilmaameedka u ah ee uu Zidane ku taageerayo.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda ma jirto cid kooxaha Liverpool iyo Real Madrid ka tirsan oo xaqiijisay in uu jiro kulan Mohamed Salah iyo saraakiisha Madrid dhex maray.